Ogaden News Agency (ONA) – Horumarin dacaayad loogu talagaly iyo in Dalka lagu dhoco – Fiiri
Waxaa aad wax loola yaaba ah markaad aragto qof caqli leh oo casrigan nool oo kugula doodaya horumar ayaa lagaadhay ama ay Itobiya u wadaa dalkeena. Hadaan dhanka fiican ka eegno shaqsigaasi waxaa lagu tilmaami karaa un inuu yahay qof caadi ah oo lagu marin habaabiyay dacaayadaha sawirka oo aan xog-ogaal u ahayn arimaha hoose ee dalkeena ka socda.
Filimka aad ka daawateen halkan ee Cabdi iley uu leeyahay waa been horumarka aan caalamka iyo dadweynaha u sheegayno waxaa lagu tilmaami karaa waxa loo yaqaano – A Moment of Truth – oo ah in qof been siduu u sheegayo mar uusan ku talagalin ay ka soo baxsato hadal run ah. Sideedaba Horumar loogu talagalay dacaayad iyo in dadweynaha lagu sasabo ma noqodo Horumar waara oo dalkaasi uu u aayo.
Waxaan horey u soo marnay warbixintii lagu soo bandhigay kitaabkii IHASA ee Dr. Maxamud Ugaas uu kaga sheekeeyay sida ulakaca ah ee Itobiya ay u burburisay dhamaan rukunadii dhaqaale ee caalamka ugu talagalay inuu ku horumariyo dalka Ogadenya. Halkan ka Akhri.
Waxaa kaloo aad halkan ka akhrisaan daraasaad loo sameeyay Masruuca loo yaqaano – Gode West Irrigation Project– . mashruucan oo si fiican u tafatiran waxaa loo qoondeeyay miisaaniyad wadarteedu tahay 74,296,025.44. Todobaatan iyo Afar Milyan oo Birr. Mashruucaa waxaa qaatay inuu hirgaliyo Ciidanka Wayaanaha sida ay mashaariic badan oo ku magacaaban dalkeena loo siiyo. Lacagta baaxadaa leh waxaa jeebka ku shubtay Jenenka fadhiya Harar iyo inta la ogsoon. Mashruucaa oo caalamka lagaga cunay lacagta mucaawanada ah waxaa laga hirgaliyay dhowr xafiis iyo dhul baaxadiisa aan ka badnayn 10Hektaar oo loogu talagalay in sawiro laga qaado.
Horumarka dalkeena ka socda waa midkaa, mana dhici karto, horeyna uma dhicin inuu horumariyo gumaysi dal uu gumaysto. Dalwadii xooga badnayd ee Soofyeetka ama Ruusha (USSR) wadamadii ay gumaysanayeen ee waliba ugu khayraadka badnaa waad la socotaan meesha ay kaga tageen. Mana filayo inuu jiro qof aaminsan inay Itobiya ka diiqsisan tahay Ruushka ama ka awood badan tahay.
Biyo sacabadaadaa looga dhargaa.